Howlgallo dad lagu soo qab qabtay oo laga sameeyay magaalada Boosaaso – Radio Muqdisho
Ciidamada ammaanka ee magaalada Boosaaso ayaa howlgallo amni xaqiijin ah ka sameeyay xaafado ka mid ah magaaladaasi, kaddib markii xalay bom gacmeed lagu tuuray saldhiga dhexe ee magaalada Boosaaso.
Howlgallada ayaa lagu soo waramayaa in ciidamada ay mid mid u galayeen guryaha, waxaana ay ku soo qab qabteen tiro dad ah oo ay saraakiisha ciidanka ku sheegeen in ay ku socoto baaritaanno dheer ah oo lagu kala saarayo kuwa la shaqeeya argagixisada Shabaab iyo kuwa kale.
Bomgacmeedka lagu weeraray Saldhiga booliska ee Boosaaso ayaa waxaa ku dhaawacmay labo qof oo uu mid ka mid ah ahaa askari, halka qofka labaad uu ahaa shacab goobta ka agdhawaa, kuwaasi oo xaaladooda caafimaad la sheegay inay soo hagaageyso.
Howlgalladan ay ciidamada ammaanka ee magaalada Boosaaso ka fuliyeen xaafado ka mid ah magaaladaasi ayaa imaanaya xilli ciidanka ay xoog kaga saareen Buuraleyda Galgala maleeshiyaadka Shabaab oo ku dhuumaaleysanayay, kuwaasi oo firxad kooda laga cabsi qabo inay galaan magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari.
Bulshada Gobolada dhexe oo loogu baaqay dib u dhiska xarumaha danta guud